Qodobo laga soo saaray kulan lagu xalinayey cabashada ganacsatada Bakaaraha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Kulan deg deg ah oo ay xalay isugu yimaadeen guddi uu hoggaaminayo ku simaha Ra’iisul wasaaraha, ahna ku xigeenka Ra’iisul wasaaraha, Ridwaan Xirsi Maxamed isla markaana ay qeyb ka yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed, ayaa looga hadlayey sidii xal loogu heli lahaa cabashooyinka ay dowladdu u soo gudbiyeen ganacsatada suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Warkan ayaa ka soo baxay xafiiska Wasiirka Warfaafinta iyo Hannuuninta Dadweynaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, waxa uu yiri Wasiirka “Kulanka ayaa waxaa lagu falan qeeyey sidii iskaashi iyo wada shaqeyn loogu qaadi lahaa Canshuurta dowladda, iyadoo guddiga ay si hoose uga hadleen cabashooyinka tooska ah ee ay ganacsatadu ka qabaan qaadista Canshuuraha dowladda”.
Kulanka deg degga ahaa ee guddigaasi kaddib ayaa laga soo saaray qodobbo ay isla garteen Xukuumaddu iyo ganacsatada Soomaaliyeed, waxaana ka mid ahaa qodobbada la isla gartay.
A) In Ganacsatada Soomaaliyeed ay bixiyaan Canshuurta dowladda, si ku saleysan sharciga dalka.
B) In wixii Canshuur ah ay qaadi karaan oo kaliyah hey’adaha ugu xilsaaran dowladda qaadista Canshuurta, dhanka kale ciddii qaadda Canshuur aysan ka warqabin hey’daha dowladda in laga qaado tallaabo sharci ah.
“Xukuumaddu waxa ay fareysaa dhammaan hey’adaha ammaanka in ay sugaan nabad-galyada ganacstada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri war kazoo baxay dowladda Soomaaliya.
C) In cabashooyinka ka yimaada Ganacsatada Soomaaliyeed ee la xiriira Dakedda, Koontaroolada iyo Canshuurta loo xaliyo si ku dhisan is afgarad iyo wada shaqeyn, dhanka Xukuumadda iyo Ganacsatada ah.
Shirkaan degdega ah ee xalay ka dhacay Muqdisho ayaa ka dambeeyey markii shalay ay shaqo joojin ballaaran sameeyeen ganacsatada Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, iyagoo ka cabanayey canshuur dhowr meel looga qaadayo.